Boomerangs: Sida Loo Dhiso loona Daalo Iyaga - Ikkaro
Waa maxay boomerang?
Boomerang waa shay markii la tuuro ka dib, uu ku laabto meeshii uu ka soo jeeday sababo la xiriira muuqaalkiisa gaarka ah iyo qaabka loo bilaabay. Qalab kastaa wuu ansax yahay si loo dhiso boomerang: alwaax, balaastik, kartoonno, kaarboon kaarboon, aluminium, iwm
Sidee boomerang u shaqeeyaa
Waxay qaadan karaan ku dhowaad nooc kasta oo ay tahay in la sii daayo si markaas ay ugu wareegaan dhidibkooda.Warka wiishka hawada waxaa ugu wacan qaabka miskaha, oo leh muuqaal la mid ah baalasha diyaaradda. "weeraraya" hawada sida ay boomerang isku rogto oo u safarto. Jidka barakicintu wuxuu ka madax banaan yahay xawaaraha toosan iyo xawaaraha uu ugu wareego dhidibkiisa waana joogto joogta boomerang kasta. Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay halka boomerang uu ku wareego dhidibkiisa iyo horumarkiisa, daabka xilligaas ku wareegaya jihada dhaqdhaqaaqa boomerang wuxuu taageeraa in ka badan midka xilligaas u weeciya dhanka ka soo horjeedka ee hore, kaas oo a Xuddunta ayaa la soo saaraa ama ka-soo-kabashada gyroscopic ee macnahaas.
Sidaa darteed Boomerangs waxay yeelan karaan tiro kasta oo ah garbaha. Garbaha uma baahna inay isku mid ahaadaan ama isku ekaadaan boomerang; Waxaa jira boomerangs u eg V, a W, oo leh seddex blad, garbaha loo qaybiyo sida aaladaha helikobtar, oo u qaab eg kangaroo, qoolley, kalluun, iwm. Waqtigan xaadirka ah isticmaalka isboortiga ee boomerang waa mid aad u baahsan, waxaa jira horyaalo caalami ah oo, qaab ahaan, habka loo qabto, saxnaanta soo celinta, waqtiga duulimaadka, tirada "qabashada" waqti go'an ama masaafada wuu dhaqaaqaa ka hor inta uusan soo noqon, si uu u siiyo tusaalooyin dhowr ah.
Dhammaan waxyaabihii farshaxanka ee badanaa loo yaqaan boomerang dib ugama laaban launcher: kuwii loo adeegsaday ugaarsiga aborigine-yaasha Australiya ma aysan soo laaban magaceeduna ma ahayn boomerang, laakiin waa kylie.
Boomerangs soo laabashada waligood looma adeegsan ugaarsi ama dagaal. Kylie wuxuu joojiyay in la isticmaalo markii farshaxanada kale ee ugaarsiga ah sida qaanso iyo fallaadho lagu soo rogay.
Boomerangs kuma eka Australia; kii ugu da'da weynaa ee ilaa iyo hada la taariikheeyay waxaa laga helay Poland 1987 dii da 'weyna dhaaftay 20.000 oo sano. Waxaa laga helay shanta qaaradood, xitaa waxaa ku jiray xabaashii Tutankhamun, in ka badan saddex kun oo sano ka hor.
Isticmaalka ugu weyn ee la siiyay boomerangs ee qadiimiga Masar wuxuu ahaa qori gacmeed.
Sida loo sameeyo boomerang oo leh mitir alwaax ah
Haa; Waan ogahay in fiidiyowgu uu ku qoran yahay Ingiriis, laakiin markaad aragto waxaad si fiican u fahmi doontaa habka loo dhisayo boomerang-kan, ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo warqad boomerang
Saddex fiidiyow oo lagu barayo sida loo sameeyo boomerang warqad yar.
Aad ufudud, laakiin way shaqaysaa, in kasta oo ay tahay inaan ka digo inay adag tahay in la helo hab dib loogu tuuro. Ha filanin natiijooyinka sida kuwa boomerangs alwaax ama xayaysiisyada kale, laakiin sida ciyaar aan kala sooc lahayn oo kulan ah ama loogu talagalay carruurta inay ku ciyaaraan aad ayey u fiican tahay.
Waxaan ku guuleystey qiyaastii 30 - 40 cm. Marka waad isku dayi kartaa inaad aragto haddii aad ka adkaan karto ;-)
Waxaan idiinka tegayaa dhowr fiidiyow oo dheeri ah, inkasta oo midkoodna ay ku filnaan laheyd, maadaama howshu ay tahay mid aad u fudud in la fuliyo, in kastoo aysan aad u badneyn in la helo warqadda boomerang dib kuugu soo noqday
Boomerang Blueprints waxaa qoray Pierre Kutek
Xiriirinta soo socota ayaa saameyn ku leh adduunka boomerangs waxaan u maleynayaa inay u qalanto boosteejo si loo muujiyo.
Kuwa sida aniga oo kale ku bilaaba, ama xiise u leh waa inay fiiriyaan. Khubarada Boom hubaal way ogyihiin, laakiin waa isha guud ee tixraaca.
Waa shabakadda Pierre Kutek halkaas oo aan ka heli karno xog ururin qorshooyinka boomerang oo leh boqolaal qorshooyin oo la heli karo
Shaki kuma jiro Isku soo uruurinta ugu fiican ee tallaalada boomerangs in aad ka heli karto internetka.
Boomerang oo wata CD ama DVD
Waxay leeyihiin jahligu aad buu u dhiiranayaa…. taasna cadeynteeda waa isku daygayga dhis boomerang leh cd, taas oo noqotay gabi ahaanba fashil.
Laakiin mahadsanid magacayga oo furay bog, Boomeralia si aad ah ayaa loogu taliyay, waxaan arki karnaa qorshayaasha iyo noocyada boomerang ee CD-ga wata
Aniguna waxaan xaq u leeyahay inaan ku ciyaaro CD / DVD
Waa a Kor u kaca Stanislaus, Wali ma aqaano cida uu yahay iyo cida aan jeclaan lahaa tixraac
Ku dhis boomerang CD-ga (Fashil)
Waxaan aqriyay waqti hore in aad cdib u dhiska boomerang adoo isticmaalaya CD, iyo inay suurtagal ahayd in lagu duulo gacan 1 mitir ah waana inaan tijaabiyo.
Kahor waxkasta iyo aniga kadib guuldaradii hore ee dhismaha boomerang Waa inaan kaaga digaa in midkani uusan duulin sidoo kale.
Dhisida boomerang 1
Inbadan baan doonayay sameyso boomerang. Waxaa jira degello degmooyin leh qorshooyin faahfaahsan iyo sharraxaad ku saabsan agabyada loo adeegsanayo iyo qaabka loo dhisayo
Laakiin sidii had iyo jeerba, waa inaan caddeeyo wixii aan madaxayga galiyay, iyo khibrad u leh in kastoo dad badani kula taliyeen arintaas.
Uma socdo inaan daabaco qoraalkan, laakiin sida khaladaadka sidoo kale waxay kuxiran yihiin, waa kan isku day inaad dhisto boomerang-dabo cad leh.
Fikradda waa mid aad u fudud. Waxaan qabaa a boomerang, Waxaan ka sameeyaa caaryar ka dibna waxaan kaliya ka buuxiyaa xabagta cad.
Sida loo tuuro boomerang
In kasta oo balooggan waxyaabaha ku jira ay yihiin kuwo asal ah ama lagu daray, haddana waxaan ka reebbannahay inaan maqaalkan ku dhajinno sida loo tuuro boomerang oo aan u maleynayo inay muhiim u tahay dhammaan kuwa doonaya inay ka bilaabaan hiwaayadda / cayaarahaan.
Halkan waa tagtaa….
Maqaalka iyo sawirrada laga soo qaaday boomeralia. meesha ay ka oggolaadaan taranka maqaalka.
Lagu qabtay sidaad jeceshahay inta qaybta fidsan ay ku taal bannaanka. Macno malahan majarafadku, ha ahaato labada farood ama gacanta oo dhan. Waa inaad awood u leedahay
Si aad ah horey ugu riix
Sii wareejin ku filan, waxa ugu muhiimsan uguna adag waa in la daabaco wareejintiisa
Waxaan qaban doonaa boomerang sida aan dooneyno, ilaa inta qeybta fidsan ay ku taalo banaanka qeybta qaloocdana ay ugu dhow dahay wejigeena. Qabsasho kasta oo aan qabanno way shaqeysaa illaa iyo inta aan siino xoog ku filan. Boomerang waxaa qabta qaybta loo yaqaan 'convex' dhanka toogashada. Qaybta fidsan marwalba dibedda. Sawir gacmeedkani waa gacan midig
Dhisida iyo duulista boomerang
Aan isku dayno dhis boomerangIn kasta oo aasaasi ah, waxay leedahay duulimaad dhammaystiran waxayna na bari doontaa waxyaabo ku saabsan aerodynamics-ka oo aan ka dalban karno mashaariic kale.
Waa maxay boomerang? Asal ahaan waa baal sababo laxariira qaabkiisa, muuqaalkiisa iyo nooca bilaabida aan sameyno, waxaan kaheleynaa inaan duulno oo aan kusoo noqono. Maxay tani u dhacdaa? Anagoo si ku filan u naqshadeynay astaamaha garabka, waxaan awood u yeelanay inaan ku abuurno cadaadis hoose qeybta kore iyo mid ka sareeya qeybta hoose, taasoo abuureysa waxa loogu yeero saameynta wiishka "waxay la mid tahay inaan bedelnay dabeecadda culeyska culeyska". in si fiican loola macaamilo. maqaal kale oo la wici karo Maxay diyaaradaha u duulaan?